21. ပညာအကြောင်း စာအကြောင်း ဒေါက်တာသန်းထွန်းနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
(ရွှေကျော် တွေ့ဆုံမေးမြန်းသည်) ရွှေကျော်။ ။ပညာရေးကိစ္စကို သိချင်တာလေးတွေ မေးချင်လို့ပါ။ သန်းထွန်း။ ။ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေအရပေါ့။ "ပြောတိုင်းလည်း မဖြစ်၊ ဖြစ်တိုင်းလည်း မပြော" ဆိုတာတွေ​ ...
22. မွေးနေ့ပွဲ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
၂၉ နိုဝင်ဘာ ၁၉၁၅ ဒေါ်အ​မာ့မွေးနေ့၊ အမရပူရ တောင်လေးလုံးမှာ လုပ်မယ်။ "ဒေါ်ဒေါ့်မွေးနေ့လေ၊ သွားကြစို့ ဆိုလို့သာ လိုက်ခဲ့ရတယ်။ မျက်နှာပူလိုက်တာကွယ်" လို့ ပြောတယ်။ လာတဲ့ လူတွေက လက်ဆောင်ပေးကြတော့မယ်။ "ငါကသူတို့ ...
23. ရှေးဟောင်းပစ္စည်း ထိန်းသိမ်းရေး - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
ရှေးဟောင်းပစ္စည်းကို ရှာတယ်ဆိုတာက အရင်က အဖြစ်အပျက်တွေကို ဖော်ထုတ်ချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးပစ္စည်းတွေက ကုန်ခဲ့တဲ့ခေတ်ကလူတွေ ဘယ်လို အဝတ်အစားတွေကို နှစ်သက်မြတ်နိုး ​စားသောက်ကြတယ်။ ဘယ်လို အဝတ်တန်ဆာ ကို ...
24. ကျမ်းဟောင်းများ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေး - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျမ်းဟောင်းတွေဟာ ပေ၊ ပုရပိုက်နဲ့ အများအပြား ရှိတယ်။ ဒါတွေကို တည်းဖြတ်မယ့်လူ ရှာပြီး၊ ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေသင့်တယ်လို့ အကြံရသူတွေက၊ မစ္စတာဖာနီဗယ်နဲ့ဦးဖေမောင်တင်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က ဆရာလင်း၊ ...
25. ပုဂံသင်္ကြန် - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
သင်္ကြန်ဆိုတဲ့ စကားအရင်းအမြစ်က ပါဠိ သင်္ကန္တ၊ သက္ကတ သင်္ကြန္တ ဖြစ်လို့ ခေါင်းလျှော်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ ကုန်းဘောင်ခေတ် ဘုရင်တွေ ခေါင်းလျှော်တာကို ပွဲတစ်ခုအနေနဲ့ သင်္ကြန်တော်ခေါ်တယ်လို့ ရာဇဝင်ကျမ်းတွေမှာ ...
26. ရှေးက ဆည်မြောင်း - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
ပုဂံခေတ် ကျောက်စာတချို့အားကိုးနဲ့ ဆည်မြောင်းအကြောင်းကို ပြန်ပြီး စစ်ဆေးကြည့်တော့ အများ ပြောလေ့ရှိပုံကို နည်းနည်းတော့ ပြင်ဆင်ရမယ် ထင်တယ်။ ပုဂံအနားက အနောက်ဖွားစောရွာ ဓမ္မရာဇိက ဘုရား အရှေ့မုခ်ဂူထဲက ကျောက်စာအရ ...
27. အနိရုဒ္ဓ (၁ဝ၄၄-၁ဝ၇၇) - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
... ယခု မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်မလာမီ အချိန်များ၏အကြောင်းကို အတတ်နိုင်ဆုံး အကျဉ်းချုံ့ပြီး ကျွန်တော်ရေးဖူးတာကို ပြန်၍ တင်ပြပါရစေ။ (သန်းထွန်း "မြန်မာသမိုင်း၊ လူမှုရေးရာအယူအဆ" အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေး သားပြီး ...
28. လက်ဝါးပြကာရတဲ့ နိုင်ငံ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
နိုင်ငံဟူသော ဝေါဟာရကို ပုဂံခေတ်ကပင် စတင် တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ (ပုံ ၁၉ က၆) ၇ အောက်တိုဘာ ၁၁၉၆၊ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၁၁၉၈) ပုဂံခေတ် ခရစ် တစ်ဆယ့်နှစ်ရာစုနှစ် ကုန်ခါနီး ဒုတိယစည်သူ(? ၁၁၆၅-၁၂၁၁) လက်ထက် ပုဂံနိုင်ငံ ရဲ့ အကျယ်ကို ...
29. သေသားစား၍ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
မြန်မာတွေ အငြင်းအခုံ ဖြစ်ကြလို့ တရားရုံး ရောက်တဲ့အခါ တရားသူကြီးက အမှုကို စစ်ဆေးပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ ဖြတ်ချက်ကို အမှုရှင်နှစ်ဦးက ကျေနပ်ရင် လက်ဖက် အတူနှိုက်စားကြတယ်။ အဝခေတ်၊ ကုန်းဘောင်ခေတ် ဖြတ်ထုံးတွေ ...
30. မင်းတို့ကား တမန်ကို မချုပ်ရာ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
သက္ကရာဇ် ၆၄၇ (ခရစ်နှစ် ၁၂၈၅) ခု ပြိက်ကသိုဝ်နှစ် ပြည်အနောက် ဖက်လှည့်(ကျ)နှိုက်မင်းကြီးနိယ်တစ်မူ၏ (ကျောက် စာဓာတ်ပုံ ၂၇၁၊ စာ ကြောင်း ၁-၂) ပုဂံ မင်္ဂလာစေတီကျောက်စာ အစတွင် အထက်ဖော်ပြပါ စာတစ်ပိုဒ်ကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ...
31. မြန်မာဇာတ်သဘင်စာအုပ် ဝေဖန်ချက် - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
... သန်းထွန်း မြန်မာပြန်သည်။ မောင်ထင်အောင်၊ မြန်မာဇာတ်သဘင် စာမျက်နှာ ကဲ+၂၅၈၊ လန်ဒန် ဟမ်ဖရီမေလ်ဖို့ဒ် အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ပုံနှိပ် ၁၉၃၇၊ တန်ဖိုး ၁၁ သျှီလင် ၆ ပဲနိ။ ဒပ်ဗလင်တက္ကသိုလ်က၊ ကျမ်းပြုသူကို ...
32. စာအုပ် (အကဲဖြတ်) - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
အကဲဖြတ်တယ်ဆိုတာ သူများ ရေးထားတဲ့စာကို ရှင်းရှင်း ပြောတော့ ကောင်း မကောင်း၊ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရိုးရိုးသားသား ပြော တာ ဖြစ်တယ်။ ပြောတဲ့လူက မြင်သလောက် ပြောဝံ့ဖို့ လိုတယ်။ အပြောခံရတဲ့ လူကလည်း ဟုတ်သလောက်တော့ ပြောပါစေပေါ့လို့ ...
33. စာဖတ်နည်း - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
စာကို ဘာပြုလို့ ဖတ်သလဲ။ အပျင်းပြေဖို့၊ ပညာရဖို့ ဖတ်တယ်။ ငယ်ငယ်ကဆိုရင် အပျင်းပြေ ဖတ်တယ်လို့ ဘယ်မှာ ရှိမလဲ။ နောက်၊ ခြောက်နှစ်သားလောက်မှာ စာသင်ကျောင်း ရောက်တော့ အပျင်းဖြေမှာလား၊ ပညာရမှာလားလို့ ဘာသိ မှာလဲ။ ...
34. မြန်မာသမိုင်း အတိုအထွာ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
ပြည်မြို့ဘက်မှာ ပါဠိကျောက်စာ၊ ပျူကျောက်စာတွေမှာ ရေးတဲ့ လက်ရေးဟာ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းက ဂိုအ အနား၊ ကနရ မြောက်ပိုင်း ကဒံဘနယ်မှာ ခရစ် ငါး​-ခြောက်ရာစုနှစ်က ရေးခဲ့တဲ့ အက္ခရာနဲ့လက်ရေးပုံစံ တူညီတယ်။ ယိုးဒယား ​လောပူရိက ...
35. မြန်မာတက္ကသိုလ်များနှင့် ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
အက္ခရာတင်ပြီး ရေးမှတ်ထားတဲ့ အထောက်အထားရှိမှ သမိုင်း ဖြစ်တယ်။ သက်ကြီးစကား သက်ငယ် ကြားဆိုပြီး ပြော တိုင်း မယုံသင့်ဘူး ဆိုတဲ့စကား၊ ရှေ့တန်း ရောက်လာတဲ့အခါမှာပဲ အရင်က ရေးမှတ် ပြောဆိုနေကြတဲ့ ဦးကုလား မဟာ ရာဇဝင်၊ ...
36. မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် လူမှုရေး - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
ဗုဒ္ဓသာသနာ (မြတ်စွာဘုရား၏ဆိုဆုံးမချက်) တွေဟာ အိန္ဒိယအတွေးနဲ့အိန္ဒိယလူမှု အခြေခံဖြစ်လို့ မြန်မာလိုဒေသကို ရောက်တဲ့အခါ မူရင်းနဲ့ အသင့်အတင့် ကွဲပြားခြားနားချက်တွေကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီလို ခြားနားတဲ့အခါ ဘယ်လို ...
37. ကက္ကူ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
... - မောင်သာနိုး ပိုၼ်းၵွင်းမူး ဝတ်ႉၵူႇမူၸွႆႈ (ထုင်ႉပူင်း) - ၶိူဝ်းသႅၼ် ကက္ကူမွေတော် ၃ဝဝဝ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း ...
38. ကက္ကူမွေတော် ၃ဝဝဝ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
တောင်ကြီးအနောက် ၂၆ မိုင်ကွာမှာ ဘုရားစေတီငယ် သုံးထောင်နီးပါး တစ်စုကြီး တွေ့ရလို့၊ ကက္ကူဘုရားတောနာမည်နဲ့ စာတမ်းတစ်ခုကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်း (၂ဝဝ၃) ၃၇-၃၉ မှာ ထည့်လိုက်တယ်။ အချုပ်ကို ပြောရရင် ...
39. မြန်မာ့သမိုင်းအဖွဲ့က ထုတ်ဝေပြီး ထုတ်ဝေဆဲ စာအုပ်တို့ကို ဝေဖန်ခြင်း - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
... သန်းထွတ်၊ ဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ယဉ်ကျေးမှုဌာန - အဖွဲ့ဝင် သန်းထွန်း၊ ဒေါက်တာ၊ သမိုင်းပါမောက္ခ - အဖွဲ့ဝင် သော်ကောင်း၊ ဦး၊ စာကြည့်တိုက်မှူး (ထပ်ဖြည့်) - အဖွဲ့ဝင် သိန်းမြင့်၊ ဦး၊ သံအမတ် - အဖွဲ့ဝင် ...
40. ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်စာစုစာရင်း
eBook file size: 288 KB ebook pages: 27 Publication: Download Related Articles ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏စာပေဆောင်းပါးများ Dr.Than Tun's Written Facts ...